Cameroon - Dhibaatada Ingiriisiga ah: Gobolka Galbeedka khatarta! - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » COMPANY »Cameroon - Dhibaatada Ingiriisiga ah: Gobolka Galbeedka khatarta!
Deriska Waqooyi-galbeed iyo Koonfur Galbeed, dhibaatooyinka ka badan bilaha 30, gobolka Galbeedku wuxuu ogyahay khatar aad u daran. Mas'uuliyiinta ayaa ku dhawaaqaya digniinta.
Tallaabo degdeg ah ayaa looga baahan yahay gobolka Galbeedka. Dhibaatada dhaqaale-bulshadeed ee ruxay gobollada dariska ah ee waqooyi-galbeed iyo koonfur-galbeed tan iyo bishii Oktoobar 2016 horay u soo saartay saameynteeda galbeedka. Marka laga soo tago dadka soo galaya barakacayaasha, gobolkaas waxaa soo wajahday soo-saarisyo hubaysan oo hubaysan, iyo sidoo kale dhacdooyinka afduubka.
Sida laga soo xigtay tirokoobyada Jade (Saxafiyiinta Afrika ee Horumarinta), in ka badan 50 000 guuray Dhibaatada Anglophone horey u degeneyd gobolka Galbeedka. Tirooyinkani rasmiga ah ee shaki kuma jiro dhabta dhabta ah. Saddex qaybood ayaa ah kuwa ugu horreeya: Menoua (10 000 guuray), Bamboutos (20 000 guuray) iyo Wiil (20 000 guuray)
Daryeelkooda, ilaa hadda, waxaa bixiya shakhsiyaad. Kuwaasi, inta badan saraakiisha la soo doorto ee degaanka, ayaa sheegaya in ay mar horeba ka baqayaan. "Isla markii aan tago tuulada, marwalba waxaan ka helaa xaglo badan oo xoogleh xannibaadaha fadhiya gurigeyga oo i sugaya. Inta badan waa carruurta aan xitaa tagin dugsiga. Qaar badani ma heystaan ​​wax cunaan, qaar kalena dhar ma laha. Tan waa in lagu daraa kiisaska cudurka. Dhammaantood way waydiinayaan inaan xal u helo dhibaatooyinkooda. Markasta, waa inaan gacanta u geliyaa jeebkeyga si aan u caawiyo. Laakiin, taasi waa mid aad u badan! Gaar ahaan tan iyo markii ay yimaadaan wax badan oo ka badan. Anaga, shakhsiyaadka, way ka daaleen kharashka. Hadday dawladdu qaadato mas'uuliyad ama loo diro gurigaduufaan Jean Tsomelou, Senator hore iyo xoghayaha guud ee hadda Xisbiga Dimuqraadiga Bulshada (SDF).
Xaaladdani waxay keeneysaa iskuulaadka dugsiyada. Kiiska Dugsiga Hoose ee Numbnkoun, oo ku yaal Noun. "Carruurtu waxay yimaadaan maalin kasta. Waxay ka cararayaan dagaalka, gaar ahaan waqooyi-galbeed, maadaama ay tahay dhawr mayl halkan. Waxay ku fadhiyaan dhulka sababtoo ah ma heysano miiska kursiga keydka. Waanu u cambaareynaynaa maamulka, laakiin waxbaa laga sameeyay ilaa iyo hadda. ", cabasho Brunhilda Kuah, agaasimaha Kooxda 1.
Tani waa in lagu daraa hoos u dhaca dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha, gaar ahaan ganacsiga iyo sii kordhaya amni-darrada. Magaalooyinka Mbouda iyo Bangourain ayaa hore u soo weeraray dhowr weerar. Gacan-qabashada burcad-badeedda ayaa loo soo bandhigay dagaalyahan ka soo jeeda beelaha kala-guurka ah. Kufsi qaadashada ayaa sidoo kale sii kordheysa, gaar ahaan magaalada Fongo-Tongo.
Hadda, xukuumaddu weli ma aysan helin jawaab ku habboon khatarta ah ee kufsiga. Guddoomiyaha Gobolka Galbeedka, Awa Fonka Augustine, waxay marti galisaa hoolalka magaalada si loo abaabulo si kor loogu qaado isdhexgalka dadka barakacay.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/24/cameroun-crise-anglophone-la-region-de-louest-en-danger/